Anyị anaghị anakọta Adreesị IP gị na usoro ọ bụla n'ihi na odownloader.com na-asọpụrụ nzuzo nke ndị ọrụ ya.
Kuki bụ faịlụ nke chọrọ ikikere pụrụ iche ịdebe na nchekwa data gị. Ozugbo ị kwenyere na iwu kuki anyị, mgbe ahụ, a ga-agbakwunye faịlụ a nke ga-enyere gị aka ịma mgbe ị gara na saịtị anyị. Anyị choro kuki ndekọ okporo ụzọ iji chọpụta ọrụ ma ọ bụ peeji nke a na-eji. Usoro a dum na-enyere anyị aka nyochaa okporo ụzọ webpage ka anyị nwee ike ime ka ọtụtụ mmezi ka oge na-aga. Anyị na-eji ozi ndị na-esonụ maka atụmatụ nyocha, wee wepụ ya na sistemụ anyị mgbe usoro nchịkọta dum ezuchara. Ọ dịịrị gị ma ị na-anakwere ma ọ bụ na-agọnahụ kuki, ọtụtụ n'ime ihe nchọgharị weebụ na-anakwere kuki na-akpaghị aka, ma ị nwere ike ịhazi nke ahụ na nhazi ihe nchọgharị gị.
Anyị na-eji mgbasa ozi nke atọ na ebe nrụọrụ weebụ anyị. A na-ezubere mgbasa ozi ndị a dị ka nyocha ndị anyị na-adịbeghị anya na kuki nchọgharị nke gụnyere ọdịmma gị. Cheta, ozi a na-ejedebere na kuki gị, ọ nweghịkwa ozi nzuzo gị dịka aha, adreesị ma ọ bụ adreesị ozi-e.
Odownloader.com na-echegbu onwe ya banyere nzuzo nke ndị ọrụ ya, ọ bụkwa ya mere na anyị anaghị anakọta ozi nkeonwe gị.